कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न मुख्य तीन सुझाव – Khabar PatrikaNp
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शमा जनस्वास्थ्यविज्ञले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न मुख्य तीन सुझाव दिएका छन् । पहिलो सुझाव छ,कर्फ्युसहितको लकडाउन । दोस्रोमा लकडाउन र तेस्रो आंशिक लकडाउन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कोभिड–१९ सँग जुध्न सरकारले गरेको काम र प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए । सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले जनतामा जति चेतना बढाउन सकिन्छ, कोभिडसँग लड्न त्यत्ति नै सजिलो हुने स्पष्ट पारे । तर, आफ्नै पार्टी (नेकपा)का नेताहरूमा अहिले गैरजिम्मेवारपन देखिएको उनको गुनासो थियो । उनले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सीसीएमसी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेर उचित निर्णय लिइने बताएका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले आंशिक लकडाउन गर्न सकिने बताएका थिए । ‘कोरोना संक्रमित बढी भेटिएको हटस्पट छनोट गरी सिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘कोराना संक्रमण बढी देखिएको भूभागमा आंशिक लकडाउन घोषणा गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन नभएको कतिपय विज्ञको भनाइ थियो । ‘भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने र सेनिटाइजर लगाउने जस्ता सुरक्षात्मक मापदण्ड लागू गरेर मात्र हुँदैन’, आईसीयूविज्ञ डा. अर्जुन कार्कीको भनाइ थियो, ‘त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन । ’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लकडाउन गर्ने अवस्था हो÷होइन भन्ने विषयमा विज्ञसँग छलफलका आधारमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर भिन्न क्षेत्र भिन्न रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्न देउवाले आग्रह गरे । उनले द्रुत परीक्षण बन्द गर्न, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्न मागसमेत गरेका थिए । उनले तत्काल एक प्रदेश एक लाख पीसीआर परीक्षण गर्न सुझाए । स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त बन्दोबस्त गर्न, मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।
‘पोलिटिसियनलाई बोलाएर छलफल गरेर के काम ? लकडाउन गर्ने नगर्नेबारे डाक्टर र विज्ञसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ । विज्ञसँग छलफल गर्नुस् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भनेको छु । मान्छेको जिन्दगी ठूलो हो । मरेपछि उसलाई बचाउन सकिन्न’, देउवाले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘लकडाउनबारे सुझाव विज्ञले दिने हो । मैले त मान्छे मर्न दिन हुन्न भन्ने त हो ।’
जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले परीक्षणको मात्रा र अस्पतालको प्रभावकारिता बढाउन सुझाव दिए । लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले पहिला पनि लकडाउन गरेको हो । तर त्यसबीचमा जुन ढंगले सरकारले काम गर्‍यो । त्यसबेला समय त्यत्तिकै खेर गयो । सरकारले कामै केही गरेन’, ठाकुरले भने,– ‘लकडाउन थपेरमात्रै समाधान होइन । सरकारको योजना पनि के छ ? । दुई हप्ता थप्ने र भोलि पनि अवस्था उस्तै रहे के हुन्छ ? यसबारे सरकारले के सोचेको छ ? ’
Prevहिँडेर आइरहेकालाई रोक्न खोज्यो भने यहाँ तलसम्म हो भनेर छल्न खोज्छन्
Nextनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ८२.२९ प्रतिशत भौतिक प्रगति
भारतले शक्तिशाली विमान खरिद गरेको विषयलाई आफूहरुले बेवास्ता गर्न नसक्ने पाकिस्तानले जनाएको छ
सुस्माले कहाँ भेटिन् पूर्व युवारज पारसलाई ?
भोलि बिहान ५ बजेदेखि लागू हुनेगरि कर्फ्यु नै लगाउने …. ! (सूचनासहित)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29808)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15628)